ECN Trading Forex | Batsirwa kubva kune ECN / STP Forex Trading neFXCC
musha / About / Nezve FXCC / Our Business Model
Sezvo ECN forex broker FXCC ine Kwete Kubata Desk. Bhizimisi redu remabhizimisi rakabva pana Straight Through Processing (STP) mune imwe magetsi yakagadzirirwa mitambo, tinotarisa izvi se ECN / STP FX mufananidzo wekutengesa. An ECN / STP mutengesi wezvokutengeserana inzvimbo iyo mitemo yose yevatengi vedu inotumirwa kumakwikwi akasiyana-siyana okukwikwidzana uye akaenzana emari, kuitira kuti ienzane. Iri ndiro dzimba revanhu vanoremekedzwa rinogadzira padziva revashandi vemari. Izvi zvakananga, zvakananga kuburikidza nekugadzirisa, zvinopedza kukwanisa kwemutengo chero upi zvake kana kuparadzira maitiro, nepo kuve nechokwadi kuti hakuna kumbokakavadzana kwekufambidzana pakati peFXCC sevatengi uye vatengi vedu.
FXCC inofunga kuti kuva nehuwandu hwemari inopa mari ndeimwe yezvinyorwa zvinokosha zvatinokwanisa kupa vatengi vedu mukukura kwemashamba ekutanga. Somugumisiro takavaka hukama hwakasimba pamwe nevakawanda vevakanyanya: kuratidzirwa, kuremekedzwa uye kusimbiswa masangano emari epasi rose, kuitira kuti tive nechokwadi chokuti vatengi vedu vanobatsirwa kubva kune kukwikwidzana forex kupararira inowanikwa 24-5, kunyange panguva yakawanda yemisika yemisika uye apo dambudziko rinokosha uye zvinyorwa zvinobudiswa zvakabudiswa.
FXCC Price Aggregator nguva dzose uye inotsvaga kuongorora zvose Bidhi / Bvunza (kutenga nekutengesa) mitengo inopinda kwatiri ECN system uye inoramba ichiratidza yakanakisisa yekutengesa mutengo kugoverwa kubva kune vese vatipa mari. Izvi zvinoita kuti vatengi vedu vabatsirwe kubva mumutambo wakanakisisa weBiti / Bvunza mitengo inowanikwa pane yedu forex trading system. Iyi nzira yekutengesa inoumba nzvimbo yepamhizha yevatengesi pasinei nehuwandu hwehutano hwavo uye inopa huwandu hwakawanda hwekutengeserana kunobatsira.
Summary of FXCC trading model.
FXCC inopa vateereri vayo nzira yakakwana yekuwana mvura inonzi forex model ECN, umo vatengi vese vanowana kuwanika kumwe chete, kune imwechete yekutengeserana kwemisika, iyo maitiro anourawa pakarepo, pasina kunonoka, kana kudzokorora zvakare.
Kusiyana Nekubata Dek vatengesi, FXCC haitore kune rumwe rutivi rwevatengesi vatengesi. Isu hatitengeserwi nevatengi: mirairo, zvimiso kana mitsara uye vatengesi vese vatengi vanobatwa kudzokera shure kumashure nemapoka-mapato munzvimbo yedu yevashandi vemagetsi.
Inoshandisa nzira yedu ye ECN / STP inoramba isingazivikanwi, vatengi vedu vanoona chete mirairo inobva mukati meFXCC system.
Mukana wekurega kurasikirwa nekuvhima, kana kupararira kupararira kunobviswa.
Sezvisina Dhi Deal Dek forex broker, hapana kumbove nekupesana kwechido nevatengi vedu. Hapana chakadikanwa kwatiri kuti tive nechidziro, saka hapana kana muedzo wekuti tishandise kune vatengi vedu.
Mutengo usina kukwana uye kukwikwidzana forex kupararira.
Kupa zvakanyanya up-to-date business trading platforms.
Pano paFXCC tinotenda kuti vatengi vedu vanofanira kuva nezvose forex trading tools vatengesi vanobudirira vanoda kupiwa. Semuenzaniso, tinopa vatengi vedu vatengesi kuti vawane MetaTrader 4 forex software.
Bhiriji redu re ECN rinotitendera kupa vashandi, vanoziva naMetaTrader, sarudzo yekuramba vachishandisa avo vaanoda forex trading platform mune imwe ECN / STP.